एभरेष्ट फ्लोरिडाको लापर्बाहीले परीक्षा दिन वञ्चित – Bikas Times
एभरेष्ट फ्लोरिडाको लापर्बाहीले परीक्षा दिन वञ्चित
प्रकाश सिलवाल,काठमाडौ । नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगरस्थित एभरेष्ट फ्लोरिडा उच्च माविमा कक्षा ११ मा विज्ञान विषयमा अध्ययनरत उषा चौधरीको एक वर्षको पढाइ खेर जाने भएको छ ।
सप्तरीको राजविराजबाट पढ्नकै लागि काठमाडौँ आएकी चौधरीले गत वर्षको प्रवेशिका परीक्षामा ल्याएको ग्रेड विज्ञान विषयमा भर्ना हुन योग्य नहुँदा नहँुदै विद्यालयले भर्ना गरेर ८० प्रतिशत कोर्स पूरा भइसकेपछि मात्र उनले त्यो विषयमा परीक्षा दिन नमिल्ने थाहा भएको हो । भर्नाको समयमा विद्यालयको लापर्बाही र रजिस्ट्रेसन फारम बुझाउँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि ध्यान नदिँदा विद्यार्थी अलपत्र परेकी हुन् ।
सो विद्यालयमा यस्ता विद्यार्थी तीन जना छन् भने अन्य विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिन थालेको छ । प्रवेशिकामा चौधरीले विज्ञान र गणित विषयमा सि ग्रेड मात्र ल्याएकी थिइन् । विज्ञानमा भर्ना हुन ती विषयमा कम्तीमा सि प्लस ल्याउनुपर्ने मापदण्ड तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले जारी गरेको थियो ।
अभिभावक सम्झना कार्कीले आफूहरुले विज्ञानमा भर्ना गर्न मिल्दैन होला भन्दाभन्दै केही फरक पर्दैन भनेर भर्ना गराइएको र हाल आएर यो वर्ष विज्ञानमा परीक्षा नदिने वा व्यवस्थापनमा परीक्षा दिने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको गुनासो गर्नुभयो । व्यवस्थापनमा परीक्षा दिने भने पनि रजिस्ट्रेसन फारम सच्याउन एक सातामात्र अवधि बाँकी छ ।
यस वर्षको कक्षा ११ को परीक्षा आउँदो चैतको मसान्तमा हुनेछ । विद्यालयका प्रिन्सिपल शिशिर उप्रेतीले आफ्ना कर्मचारीको कमजोरीका कारण प्राविधिक त्रुटि भएकाले त्यस्ता विद्यार्थी व्यवस्थापनमा परीक्षा दिलाउन ट्युसन र अन्य तयारी गराउन परामर्श भइरहेको बताउनुभयो ।
त्यसमध्ये एक विद्यार्थी विज्ञान छाडेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा गएका छन् भने दुई जना अन्योलमा छन् । उप्रेतीले विज्ञानबाट व्यवस्थापनमा जाँदा लेखा र अर्थशास्त्र मात्र नयाँ विषय पर्ने भएकाले त्यसको अलग्गै ट्युसन पढाएर उत्तीर्ण गराउने आश्वासन दिइएको राससलाई बताउनुभयो । ग्रेडमा नतिजा आएपछिको पहिलो कक्षा ११ को भर्ना भएकाले समस्या आएको जनाउँदै उहाँले विज्ञानबापत लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न पनि आफू तयार भएको बताउनुभयो ।
छानबिन टोली गठन
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मापदण्ड नपुगेका विषयमा भर्ना भएका र अन्य प्राविधिक समस्याका बारेमा स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन दिन टोली गठन गरेको छ । टोलीमा बोर्डका उपसचिव भाष्कर पन्त र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमलगायत हुनुहुन्छ ।
प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय गरिने बोर्डका सदस्य सचिव डा डिल्लीराम रिमालले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले कतिपय त्यस्ता मापदण्ड नपुगेका रजिष्ट्रेसन फारम अस्वीकृत गरेको छ ।
कस्को थियो ८८ किलोग्राम सुन
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चुस्त बनाउन निर्देशन
११६ स्थानीय तहको प्रारम्भिक परिणाम, कांग्रेसको अग्रता
संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा
रौतहटमा तारजालीले घेरेर मतगणना
नेता पौडेलले भन्नु भो- जापानले सिंगो देशको अपमान गर्यो
डा कोइरालाले भन्नु भो -प्रचण्ड जी छोएर त हेर्नुस सर्लाही । नेपाली कागे्रसका प्रभावशाली नेता डा शेखर कोइरालाले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जगंली ब्यवहार छोडन आग्रह गर्नुभएको छ…
मधेशमा कांग्रेसलाई पहिलो बनाउन डा. शेखर सक्रिय ! काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र कोइराला परिवारको अलग्गै पहिचान छ । जब कांग्रेसभित्र कोइराला परिवार सजग बन्छ, तब कांग्रेसले सकरात्मक परिणाम…
२० हजार कमाउने युवा बनाउने राज्य मन्त्री चौधरीको योजना सुरेश श्रेष्ठ दाङ । श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री डिल्लीवहादुर चौधरीेले श्रम तथा रोजगारको संघिय कार्यालय दाङमा राख्ने तयारी भएको…
नेता पौडेलले भन्नु भो- जापानले सिंगो देशको अपमान गर्यो काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जापानको अध्यागमनमा आफूमाथि भएको अपमान सिंगो मुलुकमाथिको अपमान भएको बताएका छन् ।…
प्रधानमन्त्री देउवाको सय दिनका दश उपलब्धि काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले सत्ता…
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यस्तो छ ठुला दलको तयारी कांग्रेसले २ असोजपछि मात्रै तयारी थाल्ने काठमाडौ । कांग्रेसले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको…
शंकर पोखरेललाई धर्मेन्द्र झाको खुला पत्र काठमाडौं । एमाले नेता शंकर पोखरेलले लेखेको अस्वाभाविक ट्विटको विवाद बढ्दो छ र उनलाई नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र…
अनुसन्धान विभागमा जागिर खुल्यो काठमाडौं– सुरक्षा निकायअन्तर्गत गुप्तचर संगठन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर) र सहायक असई पदमा जागिर खुलेको छ । अनुसन्धान…